Mayelana Nathi - Yangzhou JNP Co., Ltd.
I-JNP - Ukunakekela Izinyawo Zakho!
I-JNP itholelwe ukwenza izicathulo zekhwalithi nezinethezekile.
Ngaso sonke isikhathi khiqiza izicathulo zamakhasimende ethu ngokusungula izinto ezintsha, ugqozi kanye nomthwalo wemfanelo.
Ngaphambi kokuthi i-JNP isungulwe, u-Amanda noBin base bevele basebenza embonini yezicathulo iminyaka engu-8.Ngaleso sikhathi, sithola usizo oluningi ezimbonini ezihlala zisekela imikhiqizo yethu emisha eyakhayo kanye nokukhiqiza, amaklayenti asisiza ukuba siqonde ukumaketha, ukumaketha kanye nomphakathi wezenhlalo osisiza ukwazi ukwenza ibhizinisi elihle.
Ngakho-ke sakhula isinyathelo ngesinyathelo, sithola izinto zokusetshenziswa ezimbonini ezahlukene kanye nezinto zokufinyelela ezimakethe ezahlukene ngokwethu, uBin waya esikoleni sezicathulo ukuze afunde ukwenza izicathulo namaphethini ezicathulo, siqiniseke ukuthi singaxhumana nefekthri kakhudlwana futhi ephumelelayo.
Futhi-ke, sineqembu lethu elihle kakhulu, elenza izinto njengoba senza phambilini.Siyazi njalo ukuthi ukusiza amakhasimende ethu ukudayisa kahle kuyibhizinisi eliwinayo kithi sonke.Sonke senza umsebenzi weqembu ndawonye.
Ukuthuthukisa & Ukuklama
Sithuthukisa izicathulo namakhasimende ethu ndawonye, ​​​​kusukela ekukhetheni izinto zokwakha,ukuthuthukisa imiklamo emishakusukela emsebenzini wobuciko, umbono
Ukuzama wonke amasampuli esiwenzayo, sibheka ikhwalithi yemikhiqizo.
Amaqembu ethu okukhiqiza, asebenze ndawonye isikhathi esingaphezu kwe-15iminyaka.Siyabonga ngokuqonda izindinganiso zethu eziphakeme, ukuhlola imikhiqizo evela ezintweni ezingavuthiwe, ukusika izingcezu, imikhiqizo enguhhafu, imikhiqizo eqediwe nokupakisha.Ngoba sikholelwa ukuthi kuzoba lula kakhulu ukwenza imikhiqizo yekhwalithi kanye nokuhlangabezana nesikhathi sokuhola sokukhiqiza.Yithi kuphela esasikwazi ukulawula inqubo, futhi iza nemiphumela emihle.
Ithimba le-JNP lithola ukwesekwa okukhulu kumakhasimende, abahlinzeki kanye nomphakathi wezenhlalo.
Ngakho-ke lawo amaphuzu abalulekile esiwakhathalele ngesitifiketi.Izitifiketi zemikhiqizo zokuvikela imvelo,impilo yabantu.Ukuhlolwa kwemboni yamalungelo abantu.
Iminyaka engu-15, sibambisene nemikhiqizo eminingi, okuhlanganisa izinhlobo zezicathulo ezidumile, izinhlobo zemfashini, izitolo ezinkulu njll.
Ngethemba ukuthi ulwazi lwethu , lungasisiza sobabili ukukhulisa ibhizinisi.